Qoor-qoor oo ka hadlay Arinta Puntland iyo Jubbaland iyo Lafta Gareen oo Baydhabo u baxay + Doorashada Aqalka sare | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Qoor-qoor oo ka hadlay Arinta Puntland iyo Jubbaland iyo Lafta Gareen oo Baydhabo u baxay + Doorashada Aqalka sare
Jan 12, 2021 - 32 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xili Soomaaliya uu ka jiro khilaaf la Xidhiidha doorashada ayaa madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa uu gashaanka u daruuray hadal dhawaan kasoo yeedhay maamul goboleedka Jubaland.
Afhayeenka aqalka sare iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud ee ahaa in dhexdhexaadintii uu ka dhex waday aanay wali wax jawaab ah ka helin, ayna ka warheleen oo keliya hirgelinta doorashada.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa kale oo uu sheegay in wali ay ku hawlan yihiin sidii xal looga gaari lahaa tabashooyinka arrimaha doorashada.
“Marna ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qeybgaleynin doorashada waa lagu heshiiyay in laga wada qeygalo ayaa sax ah, Haddii ay jirto tabashooyin ku saabsan maamulka doorashada waa in la xalliyo markaa doorasho Puntland iyo Jubaland ka hareen meel lagu yidhi ma jirto ama mid ay ka maqan yihiin sababna ma jirto maxaa yeelay mar walba waxaa laga hadlayay tabashooyinkii jiray in la xalliyo doorashadana ay waajib tahay” Ayuu yidhi Qoorqoor.
Dhinaca kale Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ayaa goordhow u ambabaxay Baydhabo, todobaadyo uu ku sugnaa Muqdisho kaddib.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa qaatay door dhex dhexaadin ah, si loo xalliyo tabashooyinka jira, waxaana uu xiriiro la sameeyay Madaxda Puntland iyo Jubbaland, iyadoo dad uu la hadlay Madaxweyne Lafta Gareen uu u sheegay in meel wanaagsan u marayo dadaalada u wado.
Qooqqoor waa laba wejile, hadalkaas iga qora.
Ma garto gari laba nin kamawada qosliso ee adigu laba qolo ishaysta mid ku biir.
Cali gar leh Caydiidna gar leh ayuu wadaa…
Qof sidaas been u sheegaya muxuu dhexdhexaadinkaraa. kkkkkkk
Khayre oo oynaya arkay intaan la casilin maalin kahor, hadanada Qoorqoor afkii baa juuqda gabay, maxaa lagu samayn hadduu runta sheego..kkkkkkkkkkk
Farmaajo laga baqay..kkkkkkk
Qoor Qoor dhagihiisa iyo af-kiisa isma maqlaan Miyaa ?
Shalay wuxuu ku hadlay waa la ogaa.Maantana Warkii war ka duwan buu wadaa, marka asaga iyo Rooble sawir waxaa ay meesha u joogaan Xoogaaga Dollars ka uu Farmaajo ku laaluusho Waana Biiraqaatayaal ku haboon in dhagax looga Saaro Xamar iyaga iyo Farmaajo Qaainul wadan.
Soomaaliya waxay noqotay meel ku fagaaraan ( Play Ground) ka dhigteen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
Guri Ba’ay dheh..!
Ciidanka ha la saaro Gedo.
Haye,waa laga saaray………
Waa in shir la qabtaa si looga heshiiuo shir loo dhanyahay.kkkkkk
Haye waa la qabtay shirkii……………
Beesha caalamka ha loo yeedho kkkk
Aakhirka waxay ku soo dhamaan Garoowe ayaan gogol dhignay.
Farmaajo mid buu qalad ku galay ee maanta cidba suaal ma waydiiseen in dalka hogaamiyo.
Qaladkaas waa in reer Bari iyo Somali kale oo Xamar in nabad ka dhacdo u labistay in dagaal ku qaaday labada gobol ee Darood majority ka yihiin Puntland iyo Jubbaland.
Malaha sii Jaale Siyaad ayuu rabaa qabiil aasi rabaa. Kjkjjj
Qabiil uu ka waantooba yiri yaaku walimaystay; by Abwaan Dhoodhaan.
Dalka tuug Farmaajo lacag siiyo u afduuban yahay..run.
Civilwar soo socda haddii Farmaajo soo noqdo ee aan aragno ninka reerkiisa qaxo oo doorkaan isdifaacin karin..run
What a bity🤭
Qoor Qoor wuxuu noqdey ridii is nuugtey,
Warkiisu waa soo xirmay.
Marka hore Daarood Majority kama ahan Jubboland lkn Kaare Kuukuuyo ayuu ku jooga, hadde JAREERWEYNE hadduu keensado Kuukuuyo oo uu sheegto inuu Majority nimo ku heysto WAA WAREER IYO CIRKOO ROOB LAGA WAAYEY ( Afmadow waan ogaa )
Ma waxaad sugeysay inuu Farmaajo idiin soo
XAWILO CANSHUURTA EEDO BATUULO, waa adiga leh cunoqabateyn ayuu na saarey.
– waliba miyuusan dhiibin Kharash police
Puntland, miyuusan KU KABIN more than millions lacagta lagu Kabo Maamulada Xamar iyo Xamar daye.
” Rag iska dhigoo ninkaan Waalan waa Jabertiye, dhinac noo dhaafiya
Mentally unstable Mr Farmaajo
Oo his crazy mindset tustay inuu Madaxweyne ku noqonkaro hadduu 8 sideedaan magaalo doorasho ka qabto
Maamulada Xamar iyo Xamar daye
– Idil Farmaajo ayaa nooga digtay 4 sano kahor.
Kala dirow ma taqaana xasaanadu waxay tahay? Farmaajo wiil yar oo aad ku af baranaysid ma aha waa madaxweynihii ummadda Somaliyeed, wuxuu huwan yahay sharaftii ummadda Somaliyeed, jooji habaarka aad la daba taagan tahay. Haddii cid waalan oo aan caadi ahayn aad tilmaamaysid kuwii dalka inta loo dhiibay boobay baa joogga, iyagaa habaar ka istaahila ummadda, waayo waxay isugu dareen cadaalad darro, boob iyo gudoon jillicsan.
Dhuusada golaha kala bax, kama hadlin lacag eedo Batuulo iyo habar shaydaan waxaan kahadlay wixii Somali deeq dayn la siiyey.
waa lacagta caawa Hawiye oo dhan aamusisay ileen aqli kale malaha oo bariis ahayne. Qadiyad baa ka hadlay ee kama hadlin lacagta Bayle caalumku u dhiibay oo Farmaajo u sheego cidda la siinayo.
Daanyeer lacag keliya yaqaan oo qadiyad lahayn Farmaajo iyo Maxamed Siyaad ayaa yaqaanayna=Hawiye.
Meelku sheeg Geedi, Cali Mahdi, Salaad Cali Jeele, Muuse Suudi Yalaxow.. etc.
Dr Bayle ayaa wada suuxiyey.
Ma ciyaal ayaad u sheekayn.
By the way ii Sheeg Jubbaland tuulo Hawiye dego..miskiin
Tuulooyinka aad tirisay Baraxley kasoo bilow oo qaar ku darsatay sida Baraawe iyo Xamar oo weligaa u talin in dagaal bacmadow dadka ku disho ahayn.
Hunguri raadis, raganimo iyo qadiyad meel mawada galaan.
Puntland iyo Jubbaland waxaan kula talin Farmaajo ammaan siiya.
Ayaga ammaan waa siin lahaayeen laakiin asaga ayaa daanyeer waxka qaldan yihiin ah.
Dagaalkiisa meel qalad ah ka bilaabay.
Gedo ku duul iyo Puntland cunaqabatee.
He will be loser.
Farmaajo Hawiye waa xoraystay ee Puntland iyo Jubbaland ayaa hortaagan..run
Qoor qoor wuxuu noqday geedkii cigaal shiidaad wadnaha kala baxay oo uu habeenkii oo dhan hortaagnaa geedyahow mawaxaan kumoodayay mise waxaad noqotay
Hada qoor qoor shalay wuxuu lahaa puntland iyo jubaland loo joojin maayo maantana wuxuu leeyahay lagama maarmo yaahuu
Ma waxaad iga sugi inaad igula muranto JILIB iyo Jamaame adigoo xadkaadu yahey Burtiinle,
Dhul Daarood haddaad u heyso WADNE IYO ENERGY waxey GAROWE U JIRTAA 20 KM, We call TUKORAQ, LAASCAANOOD IYO LAASQOREY ayaga qarni kahor ayey rawaxeen oo wiilkii Isaaq oo ku dhashey Laascaanood ayaa 20 jir ah oo ASBUUCII HORE GAARDIS KU MAREY TUKORAQ.
Xooga iyo BURAANBURKA GEDO loo hayo, maa lagu xoreeyo TUKORAQ.
Ogaadeen iyo Mareexaan ayaan XOOG iyo ENERGY ugu kala HIILIN,
Lkn ISAAQ IYO DHULBAHANTE waa igu dhib,
SOO WADNAHOO WADKA DIIDEY MAAHAN.
Ninka Ii turo ayaan feylaha gooya,
Kan u Taqaantaqiyo uma Juuqo waaye WARKA YAALO XADKA GAROWE IYO TUKORAQ.
Dhul kuu jiro 2000 km iyo 20 km
Keeba Carar iyo Cudud loo hayaa
Midda Farmaajo wlh Democracy iyo Doorashada ayaan u hiilinhayaa,
waa ninkaas u shaqeeyo ONLY Xamar iyo Xamar daye
Waa ninkaas Geedka ku xirey URURKII ISBAHEYSIGA KABLALAX
Waa ninkaas aan laheyn Tol aan Hawiye aheyn.
Waa ninkaas Aamusiyey CAAGADAHII IYO GURBAANKII aad dhihijirteen XASSAN SHIIKH WUXUU NECEBYAHAY DAAROOD.
Farmaajo waxaan isku heynaa iney Doorashadu ku dhacdo waqtigeeda
Ee waan isku RAACSANAHEY IN KABLALAX GEED WEYN LAGU XIRO.
– Dhiig iska BAAR oo Ninku waa Jabertiye Inaad SACAB UGU KAALMEYSO MAXAA KUUDIIDEY,
koley Dad iyo dhul la MAALO Daarood malahe.
* Kablalax waa Dad xataa Farmaajo Sacab u quuriwaayey.
Iska suga intaad Qaadum u noqoneysaan
Hiraab, oo XALWEYSTE Baaf Xalwaa looga dhigaye.
Ninka la yiraahdo Farmaajo wuxuu noqday tijaabo Fiican. Waxaa lays lahaa hadii nin Daarood ah Madaxweyne noqdo Daarood saaxigoo keeni Doonaan tagitaankii Garoowe ee faraha badnaana Waa laga raysan doonaa.
Hadaba waxaan la filayn baa dhacay ilaa uu Oday Faroole yiri :—— War Hawiyoow Farmaajo iska soo Cayriya iskuna kaaya keena Garoowe aan tashanee kkkkk
Dadka badan kii baa aaminsanaa Puntland iyo Jubaland waa laga Nasan Doonaa mucaarad kooda qaasatan Puntland oo Maamuladii ama Dawladihii Hawiye mucaarad Kuwada ahaa kasoo biloow Dawladii Cabdiqaasin ilaa tii Xassan Shiekh marka laga reebo tii Cabdulaahi Yusuf.
Waxay noqotay kadar oo dibi dhal….!!!
Daarood waa diideen Farmaajo Madaxweyne Hawiyana ma ogola. Marka maxaa xal ah?
Farmaajo qaladaad badan buu galay reer tolkiisna Cagtay cagta u saareen wax soo dabcayana malaha. Farmaajo buur buu fuulay Puntland iyo Jubaland na buur kaloo dheer maxaa xal ah?? Inlays saan laguma jiri karee?
Marka hore Xassan Shiikh iyo Shiikh Shariif way ku qaldanaayeen ineyba ama u tagaan ama LA TIRSADAAN PUNTLAND
Waxey aheyd iney shaqadooda qabsadaan oo ah dhulka u dhaxeeyo Galkacyo to Kismaayo.
Labada Waji ka Waji ayaan arintaas ugu sheegnay haddaan nahey Milkiilayaasha HAG GROUP.
Waxaa kaloo qalad weyn iyo sharaf dhac ah inuu Nimaan aheyn USC MAAMULO VILLA XAMAR ilaa Xal laga gaarahayo DALKII MIDOOBEY 1960, ilaa Xal laga gaarahayo Federal Fitno.
Eeda hasaarin PUNTLAND ee eeda Saar NINKA maslaxeyn SOCOTO AAN KAA MAARMIN.
50% waxaa leh Shiikh Shariif oo kala fahmiwaayey waxey isku hayaan nin geed saaran iyo Xassan Shiikh oo ilmo adeer yahiin
30% waxaa iskaleh FIQI oo fahmi waayey wuxuu ka waayey Xassan Shiikh inuusan ku haleyn FARMAAJO WAA NIN MADI AH OOD BULLYING ku maalikartid.
20% waxaa leh OTHER HAWIYE OO DHIIGII POLITICAL ACTIVITY laga miirey oo uun sugo
Wuxuu HIRAAB QARIBO.
Isku soo Duub PUNTLAND waa ninkaas degan Saxaraha, sharciga Saxaraha ayaa narey life struggles and traitorism
Meel maanta iiga qor 2030 waxaad arki doontaa Hawiye oo DARBIGA SOO TAABTEY OO LEH DAALNAYE AAN DHISANO MAAMUL XAMAR IYO XAMAR DAYE.
POPULATION, RESOURCES AND LAND FARMING that is only what we need today and we have ALLAA MAHADLEH, not Greater Somali Republic.
Xalku waa fudud yahay, waa in la Kala adkaado hadii sharciga la diidey, laakiin waa in aan arrinka qabiil laga dhigane, laga dhigaa laba kooxood 1. qolada talada Haysa oo dhinac ah iyo 2. qolada mucaaradka oo dhinac ah.
Haday seedinimo door aheyd dacay nijaaseeye
Halays dilo dagaal waxaan aheyn daawo lagu waaye. Sayid Maxamed
Rubble oo Shaley Hargeysa ka lahaa Waan goosaney, inuu maanta KU JEES JEESO MUUSE SUUDI IYO CABDI QEYBDIID
Baritana uu Hargeysa ku laabto oo uu Muuse Biixi ama Kan ka dambeeyo uu ku dhaho
DALNA WAA SOOMAALILAND
XAMAALINA WAA XAMAR IYO XISAAB LA’AAN
waxey Dhaawac iyo sharaf xumo u tahey Dhiigii iyo Hantidii loo soo hurey In Koofur dib loogu soo celiyo Jidkii laga leexiyey 1969.
Hinda Gaani ayaa bedalidoonto
Ayadana waxaa bedali doonto Ifraan.
Anigu waxaan sugaa
Drs Adna iyo Eng Feysal ( Real Somalilanders).
23.12.1986 Soomaliya waxaa loo dareeray goobaha codbixinta wax rajiimkii markaa talada hayey uu ku sheegay doorasho.Markii doorashadaas soo idlaatey Idaacadda dowladda waxaa lagaga dhawaaqay in Madaxweyne Siyaad oo cid la tartantay aanan la aqoon uu codadkii 99.9% oo u dhigantay 4,887,592 qof codkooda ku guuleystay.Sidaana uu ku helay mandate cusub oo 7 sano oo hor leh uu wadanka ku xukumayo.
Farmaajo maanta wuxuu naawilayaa mid taa adeerki sameeyey la mida ama u dhow uu sameeyo.Hadaaqa kuwa uu ka dhex qayliyo sida Mahdi Guuleed ay had iyo gooraale kusoo cecelinayaan doorashada wareegga koobaad baan kusoo baxaynaa meel kale kama iman,ee waxaa usoo dhiibey Farmaajo oo riwaayadahaas soo daawaday waxna ka ogaa xiligii ay dhacayeen
Caaqil Xaange qoraalkaa aad soo qortay dhawr jeer ayaan halkan barxada Kalshaale ku soo qoray waxaana kamid ah qoraalkan.
2021 ma kula tahay inay shaqeynayso sheekadii Kacaanka ee aheyd doorashadii ka dhacday Soomaaliya waxaa guuleystay 99% Xisbiga Hantiwadaaga Kacaanka Soomaaliyeed, musharaxiisii Jaalle Siyaad, waa sidaas sida uu Farmaajo rabo, haday saa dhacdana waxa ka danbeeyo waa burbur iyo qax, markaa ma Maraykanka Buffalo in loo cararaa la rabaa mar labaad kkkk?
Waxaan is lahaa marakan Hawiye darbigii waa soo Taabteen. Adna waxaad leedahay wali waxbaa u Dhiman ilaa laga gaarayo 2030 !!!
30 sano oo iska daba wareeg ah aan kula jirnay Daarood iyo Isaaq oon ku lahayn Soomaali kama Go’i kartaan laakiin maantay waxaa cadaatay in Hawiye ay ku qasaareen Dawladnimadii iyo isku raadintii Ummada Dalka Soomaalia.
Maantay waxaan idaacadaha ka maqlayey Beesha Mudulood oo xariga ka jartay Xarun loogu talagalay In lagu maareeyo siyaasada Soomaaliya. Waa arin Nagu cusub ! Mahadaasna waxaa iska leh Alle ka Sokoow Jaale Farmaajo.
President Farmaajo wuxuu soo dadajiyey oo uu Sahlay reer aan tashan jirin ( Hawiye ) mooge in Maantay is waydiiyaan war horta xagee loo socdaa?
Waxaan is leeyahay waa biloow fiican Hawiye Dhoohane in ay “wake up call” kusoo baraarugaan Ficilada Fahad Yaasiin iyo Farmaajo.
Waxaa la yiri waxaad shar moodid ayaa laga Yaabaa in Allah qayr kaaga dhigo marka yaan Farmaajo la sharaysanin if you know what I mean!!
Saaxiib Soomaali maantay dagaal uma baahna. 30 Sano ayaan soo marnay oo rafaad ah marka waa in Xal kale la raadiyaa.
Waxaa cajiib ah, aniga iyo Caaqil Xaangana waxaan ka hadleynaa see wax loo saxaa oo aysan u dhicin qaladkii horey loo galay, anagoo og in ninka wadanka ugu sareyeeya inuu Reerka yahay, qaar halkan wax ku qorayana waxay ooga dhegtay Daarood iyo Hawiye, sheeko iska raqiis ah, waa farqigaa, farqiga noo dhexeeya anaga iyo Reer Unukaa leh.
Farmaajo maanta wuxuu naawilayaa mid taa adeerki sameeyey la mida ama u dhow uu sameeyo.Hadaaqa kuwa uu ka dhex qayliyo sida Mahdi Guuleed ay had iyo gooraale kusoo cecelinayaan doorashada wareegga koobaad baan kusoo baxaynaa meel kale kama iman,ee waxaa usoo dhiibey Farmaajo oo riwaayadahaas soo daawaday waxna ka ogaa xiligii ay dhacayeen.
Dad badan oo caaqiliin ah waxyaabo xaqiiqa ah ayeey halkaan ku qorreen. Qaarna oo marmar anniga kamid ahay waa ku wareereen waxa odayaashaan Somaliyeed sida daanyeer Farmaajo iyo kooxda faashiliinta ah ee Hawiye ee mucaaradka isku sheegaya ku dhaqmayaan.
Denni iyo reerkiisa Majeerteen warkooda waa cadyahay. Shiiq Ahmed Madoobe, oo uu Farmaajo iyo waliba Xassan Shiiq isku dayeen in eey bully gareeyaan oo handadaan iyadda oo dhinacna argagixisada alshbabaab kaga dhagantahay isagana warkiisa waa cadyahay. Shiiq Ahmed Madoobe walaahi waa “survisor” waa noolaadaa marwalba oo “curve ball” iyo jambal loo tuuro.
Anyways, daanyeer Farmaajo waxuu rabaa dhaqankii Afweeyne sida uu Xaange sheegay oo ahaa doorashadii waan qabannay waxaana helay codkii 99,9 percent. Bal Ilaaheey Ayaan idinku dhaarshee aduunka iyo 198 dal iyo kabadan oo uu ka koobanyahay maka dhacdaa doorasho uu hal qof hello 99.9 percent codadkii. Halkaas waaye Meesha uu caqli daanyeernimiada ka keenay Farmaajo.
Sawirkaan Qoorqoor dadka Somaliyeed fursad ayeey siiyeen, oo waa ka xishoodeen, oo waa ixtiraameen laakiin waa daanyeer najis ah. Calooshiisa weeyn ayuuna u shaqeeystaa maamulka qabiilada ee Galmudug iyo mid dowlad dhexe, iyo mid Somali dantooda ma waddo.
Su’aal, ma’idinla tahay in maantay hadii xarunta dowladda reeraha ee Galmudug fadhigeedu ahaan lahaa Cadaado, in uu daanyeer Farmaajo ku darsan lahaa degmadaas meelaha uu leeyahay doorasho been ah Ayaan ku qabanayaa? Xassan Shiiq ayaana ka shaqeeyay oo aan ka yeelnay in maamulka Galmudug xaruntiisa laga dhigo Dhuusamareen, oo eey ku noolyahiin dadka uGu caqliga xun Somalida. Sidaas owgeed, dhamaan daanyeerta cabaadaya ee Hawiye, iyaga ayaa u sahlay, la shaqeeyay, empower gareeyay daanyeer Farmaajo.
Alleylaha Deni iyo Majeerteen booskoodii inta xajisteen, ayeey dadka hoos u hadlaya, dadka doqomadda ah, dadka siyaasadda qabiilka ee Somaliye aan wali fahmin ayeey xataa u doodaan. Dadka aanan codka laheeyn sida shacabka Mogadisho ee sida daanyeernimada ah argagixisadda guryaha uGu heeysta.
Farmaajo waa daanyeer nasiib badan. Waan u qirraa taas.
Horaad ooga hadashay marmar badan arinkaas uu ka hadlay Caaqil Xaange, ee ah 99.9% ayaan ku guuleysanay doorashadii dhacday.
Qoraalo badan ayaad ka qortay sheekadas.
Sargaalka, yes, waan isla fahansanahay arrinkaas.
Xaange, maahan kuwan dhahaya “aboowe kaalsho Ayaan madbacadda ku ciyaari jirray” sida daanyeer Farmaajo iyo Land of punt laga yaabo in eey dhahaan.
Ninkaas Xaange waa asal Somalida layaqaan amaba waxa eey Somalida iyaga oo ceeb ka dhigaya dhahaan waa reer Mudug sidda dadka beenaalayaasha ee mafiyada dhaqanka tuuganimada ee talyaaniga barray ku dhaqma oo u badanyahiin waxa jooga Koonfurta Somaliya ku sheegaan marka eey arkaan qof boqorka in uu qaawanyahay sheega. Yacni runta sheega.
Sargaalka iyo Cadaado
Bacda salaan waa sidaa.
Adiga iyo Cadaado marar badan baad arinkaa aan soo qoray qoralo la mida ama kaba sii qoto dheer uga hadasheen qaabka ay u fekeraan kooxdaa Ciyaala suuqiinta ah ee Villada ku xaraysan.
Siyaasad Ciyaala suuqnimo ah iyo ceebaheeda Caawa Trump baa haya ee ha kasoo waraysteen kooxda Villadu xitaa Copy-gii baalasha ka maqnaayeen ee kacaanka haddii qaar qoraalada ka gadmadeen.